Hypnovel (ဟစ်နိုဗယ်လ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Hypnovel (ဟစ်နိုဗယ်လ်)
Hypnovel (ဟစ်နိုဗယ်လ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Hypnovel (ဟစ်နိုဗယ်လ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Hypnovel (ဟစ်နိုဗယ်လ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Hypnovel® (midazolam) ကို စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအား လျှော့ချရန်၊ခွဲစိတ်မှု မပြုလုပ်မီ အိပ်ဆေး၊ထုံဆေးအဖြစ် အသုံးပြုပါသည်။ စိတ်ငြိမ်စေသည့် သို့မဟုတ် အနာသက်သာစေသည့် အာနိသင်ကို ထိန်းထားနိုင်ရန်အတွက် အချို့လူနာများတွင် ဆေးကို တောက်လျှောက်ပေးထားနိုင်သည်။
အခြားသော အခြေအနေများအတွက်လည်း ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။Midazolam သည် benzodiazepine အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဦးနှောက်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကာ ငိုက်မျဉ်းလာစေခြင်း၊ကြွက်သားပြေလျော့လာစေခြင်း၊လတ်တလောဖြစ်ခဲ့သော ကိစ္စများကို မေ့ပျောက်စေခြင်းနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို လျှော့ချပေးစေခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
Hypnovel (ဟစ်နိုဗယ်လ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Midazolam ကို ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းများတွင် ထိုးဆေးအဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။ မရှင်းလင်းသည်များ ရှိပါက သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ထံ မေးမြန်းပါ။
Hypnovel (ဟစ်နိုဗယ်လ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Hypnovel® (midazolam) ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက
အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Hypnovel® (midazolam) ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Hypnovel® (midazolam) ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Hypnovel® (midazolam) ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Hypnovel® (midazolam) ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Hypnovel (ဟစ်နိုဗယ်လ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဆေးမသောက်သုံးမီ အောက်ပါအချက်များရှိနေပါက ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
အစီအစဉ်ရှိလျှင် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေလျှင်။
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသော၊မိမိဖာသာသောက်နေသော ဆေးများရှိလျှင် သို့မဟုတ် သဘာဝသစ်ဥသစ်ဖုမှ ထုတ်လုပ်ထားသော အားဆေးများ၊ဖြည့်စွက်စာများ သုံးစွဲနေလျှင်။
ဆေး၊အစားအစာ သို့မဟုတ် အခြားသော အရာများနှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင်။
ထို့အပြင် အောက်ပါအချက်များကိုလည်း သတိပြုရပါမည်။
Midazolam သည် ငိုက်မျဉ်းခြင်း သို့မဟုတ် မူးဝေထိုင်းမှိုင်းခြင်းများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Midazolam ၏ အာနိသင်ပျက်ပြယ်ချိန်အထိ သို့မဟုတ် Midazolam သောက်ပြီးနောက်တရက်ရောက်သည်အထိ (ပိုကြာသည့် အချိန်ကို ယူရမည်) ကားမောင်းခြင်း၊စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ကိုင်တွယ်မောင်းနှင်ခြင်း သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရှိသော မည်သည့်ကိစ္စကိုမဆို မပြုလုပ်သင့်သေးပါ။Midazolam ကို အခြာသော ဆေးများနှင့် အတူတကွ သုံးစွဲခြင်း သို့မဟုတ် အရက်သေစာများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုခြင်းသည် ကားမောင်းခြင်း နှင့် အခြားအန္တရာယ်ရှိသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ကျဆင်းစေသည်။
Midazolam သောက်သုံးနေစဉ်ကာလအတွင်း အရက်သောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ငိုက်မျဉ်းစေသော အခြားဆေးဝါးများ သုံးစွဲခြင်း (အိပ်ဆေးများ၊စိတ်ငြိမ်ဆေးများ စသည်)ကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။Midazolam သည် အရက် သို့မဟုတ် အဆိုပါဆေးများ၏ အာနိသင်ကို ပိုလာစေနိုင်၍ ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်ဆေးများသည် ထိုင်းမှိုင်းလေးလံစေသော ဆေးများဖြစ်သည်ကို သိရှိလိုလျှင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ထံ မေးမြန်းပါ။
Midazolam သည် နာရီအတန်ကြာ မှတ်ဉာဏ်ပျောက်ဆုံးစေမည်။
သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ကလေးများတွင် အာနိသင်ပိုပြနိုင်သဖြင့် သတိထားသုံးစွဲပါ။
အချိန်အတန်ကြာ သို့မဟုတ် ပမာဏများပြားစွာ သုံးစွဲပြီးနောက် အချို့လူနာများအနေဖြင့် ဆေးကိုဆက်လက်သုံးစွဲရန် လိုအပ်မှုများ ရှိလာတတ်သည်။ဤသို့သော အခြေအနေမျိုးကို ဆေးစွဲသည်ဟု ခေါ်သည်။
midazolam ကို ကာလကြာရှည်စွာ သို့မဟုတ် ပမာဏများပြားစွာ သုံးစွဲပြီးနောက် ရုတ်တရက် ဖြတ်လိုက်လျှင် ဆေးဖြတ်ဝေဒနာများကို ခံစားရတတ်ပါသည်။ အဆိုပါ လက္ခဏာများမှာ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း၊ကြွက်တက်ခြင်း၊တက်ခြင်း၊ဗိုက်နာခြင်း၊ချွေးစေးများ ပျံခြင်း၊ခြေလက်များ ကတုန်ကယင်ဖြစ်ခြင်း နှင့် အော့အန်ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Hypnovel (ဟစ်နိုဗယ်လ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Midazolam သည် သန္ဓေသားကို ထိခိုက်စေကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အနေဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိလျှင် ထိုကာလအတွင်း Midazolam သောက်သုံးပါက ဖြစ်လာနိုင်သည့် ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်များကို ဆရာဝန်နှင့် သေချာစွာ ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ရပါမည်။
Midazolam သည် မိခင်နို့ရည်ထဲတွင် ပါဝင်လာမည်ဖြစ်သဖြင့် ဆေးသုံးစွဲနေစဉ် ကလေးနို့တိုက်ရမည်ဆိုပါက ကလေးအပေါ် မည်သို့သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိလာမည်ကို သိရှိစေရန်အတွက် ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ။
Hypnovel (ဟစ်နိုဗယ်လ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဆေးအားလုံးဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပေမယ့် လူအများစုအနေနဲ့ ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရလေ့ မရှိပါဘူး။ အတွေ့ရများတဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလေးတွေ ကြာရှည်စွာ ဖြစ်ပေါ်နေလျှင် သို့မဟုတ် ဆိုးရွားလာလျှင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
သွေးပေါင်ချိန်၊အသက်ရှုနှုန်း၊နှလုံးခုန်နှုန်း စသည် ပြောင်းလဲခြင်း။
ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် နာကျင်၊နီရဲပြီး တင်းနေခြင်း။
အောက်ဖော်ပြပါ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် တွေ့ကြုံခံစားလာရပါက အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုကို အမြန်ခံယူပါ။
ပြင်းထန်သော ဓါတ်မတည့်ခြင်း လက္ခဏာများ (အနီစက်များ၊အင်ပျဉ်များထွက်ခြင်း၊အသက်ရှုရခက်ခြင်း၊ရင်ကြပ်ခြင်း၊ပါးစပ်၊မျက်နှာ၊နှုတ်ခမ်း သို့မဟုတ် လျှာတို့ ရောင်ရမ်းလာခြင်း)။
ဘယ်ဆေးတွေက Hypnovel (ဟစ်နိုဗယ်လ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Hypnovel® (midazolam) ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
Cimetidine, rifamycins (rifabutin, rifampin)
အတက်ကျဆေးများ (carbamazepine, phenytoin)
စွဲလမ်းစေတတ်သော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ (e.g.,codeine)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Hypnovel (ဟစ်နိုဗယ်လ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Hypnovel® (midazolam) က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Hypnovel (ဟစ်နိုဗယ်လ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
ပြင်းထန်သော စိတ်ကျဝေဒနာ ခံစားရခြင်း။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Hypnovel (ဟစ်နိုဗယ်လ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Hypnovel® (midazolam) ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
ခွဲစိတ်မှု သို့မဟုတ် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုမပြုလုပ်မီ ၁၀-၂၀ မီလီဂရမ် တကြိမ်ထိုးပေးနိုင်ပါသည်။(အသားဆေး သို့မဟုတ် အကြောဆေး)။
၁-၂.၅မီလီဂရမ်ကို ခွဲစိတ်မှု သို့မဟုတ် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု မပြုလုပ်မီ (၂မိနစ်၊၃မိနစ်ခန့်ကြာအောင်) သွင်းပေးရပါမည်။ လိုအပ်သော အာနိသင် အပြည့်အဝ ရမရကို သိရှိနိုင်ရန် အနည်းဆုံး နောက်ထပ်နှစ်မိနစ်ခန့် ထပ်စောင့်ပါ။ ထပ်မံ၍ ဆေးသွင်းရန် လိုအပ်သေးလျှင် နှစ်မိနစ်အတွင်း ၁မီလီဂရမ်ထက် မပိုစေဘဲ သွင်းပေးနိုင်သည်။ ဆေးသွင်းပြီးတိုင်း လိုအပ်သော အာနိသင် အပြည့်အဝ ရမရကို သိရှိနိုင်ရန် အနည်းဆုံး
နောက်ထပ်နှစ်မိနစ်ခန့် ထပ်စောင့်ရပါမည်။ စုစုပေါင်းပမာဏ ၅မီလီဂရမ်ထက် ပိုသွင်းရလေ့မရှိပါ။
0.07 to 0.08 mg/kg ပမာဏကို ခွဲစိတ်မှု မပြုလုပ်မီ နာရီဝက်မှ တနာရီအလိုတွင် ပေးနိုင်သည်။ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါတမျိုးဖြစ်သော COPD ဝေဒနာရှင်များ၊အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေများသော လူနာများ၊ဆေးသုံးထားသူများတွင် ဆေးပမာဏကို လျှော့ပေးရပါမည်။ အများဆုံးပေးနိုင်သော ပမာဏမှာ ၁၀မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါသည်။
=ကနဦးဆေးပမာဏ —–> ကုသမှုပြုလုပ်ရန် အလွန်နီးကပ်ချိန်တွင် 1mg/min ထက်မပိုသော အမြန်နှုန်းဖြင့် အကြောသွင်းဆေး ၂မီလီဂရမ်ကို တကြိမ်ပေးရမည်။ ၂မိနစ်ခန့်ကြာပြီးနောက် လိုအပ်သော မေ့ဆေး/ထုံဆေး အာနိသင်ကို ရရှိနိုင်ရန်အတွက် နောက်ထပ် ဝ.၅ – ၂ မီလီဂရမ်ကို ထပ်မံပေးနိုင်သည်။ စုစုပေါင်း ဆေးပမာဏသည် ၅မီလီဂရမ်ထက် နည်းရမည်။
=ဆက်လက်ပေးထားရမည့် ဆေးပမာဏ —–>လိုအပ်သော အာနိသင်ပြစေသည့် မူလဆေးပမာဏ၏ လေးပုံတပုံထက် ပိုမပေးရပါ။
=ကနဦးဆေးပမာဏ ——–> အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်တွင် စိတ်ဂယောက်ဂယက်ဖြစ်ခြင်းအား ထိန်းချုပ်ရန် အကြောသွင်းဆေး 0.01 – 0.08 mg/kg (၁ – ၅ မီလီဂရမ်)ကို ၂မိနစ် သို့မဟုတ် ၃မိနစ်ကြာအောင် သွင်းပေးရသည်။
=ဆက်လက်ပေးထားရမည့် ပမာဏ —–> 0.02 – 0.2 mg/kg/hr နှုန်းဖြင့် ဆက်တိုက်ပေးထားရမည်။ Opioid အုပ်စုဝင် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ သုံးစွဲနေရသော လူနာများတွင် နှုန်းကို လျှော့၍ ပေးရမည်။
ကလေးတွေအတွက် Hypnovel (ဟစ်နိုဗယ်လ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးငယ်တွေမှာ Hypnovel® (midazolam) ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
=အကြောသွင်းဆေး —–> ကုသမှုမပြုလုပ်မီ ၁ – ၁.၅ မီလီဂရမ် ကို ၂မိနစ်မှ ၃မိနစ်ခန့်ကြာအောင် ပေးရမည်။ လိုအပ်သော အာနိသင် အပြည့်အဝ ရမရကို သိရှိနိုင်ရန် အနည်းဆုံး နောက်ထပ်နှစ်မိနစ်ခန့် ထပ်စောင့်ပါ။ ထပ်မံ၍ ဆေးသွင်းရန် လိုအပ်သေးလျှင် နှစ်မိနစ်အတွင်း ၁မီလီဂရမ်ထက် မပိုစေဘဲ သွင်းပေးနိုင်သည်။ ဆေးသွင်းပြီးတိုင်း လိုအပ်သော အာနိသင် အပြည့်အဝ ရမရကို သိရှိနိုင်ရန် အနည်းဆုံး နောက်ထပ်နှစ်မိနစ်ခန့် ထပ်စောင့်ရပါမည်။ စုစုပေါင်းပမာဏ ၅မီလီဂရမ်ထက် ပိုသွင်းရလေ့မရှိပါ။
=အသားထိုးဆေး —-> ခွဲစိတ်မှု မပြုလုပ်မီ နာရီဝက်မှ တနာရီခန့်တွင် 0.02 to 0.05 mg/kg ပမာဏ ပေးရမည်။ ပုံမှန်ပေးလေ့ရှိသော ပမာဏမှာ ၁ – ၃ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ အချို့လူနာများတွင် ၁မီလီဂရမ် ပမာဏခန့်ဖြင့် ဆေးအာနိသင် ပြလေ့ရှိပါသည်။
Hypnovel (ဟစ်နိုဗယ်လ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Hypnovel® (midazolam) ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ထိုးဆေး : 5mg/ ml
အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားတဲ့အခြေအနေတွေမှာ အရေးပေါ်ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ။ ဆေးလွန်တဲ့ လက္ခဏာတွေက ကတုန်ကယင်ဖြစ်ခြင်း၊စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊အလွန်အကျွံအိပ်ခြင်း၊သတိလစ်ခြင်း၊ငိုက်မျဉ်းခြင်း၊တုံ့ပြန်မှုများ နှေးကွေးခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Hypnovel® (midazolam) ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Hypnovel®. https://www.drugs.com/mtm/versed.html. Accessed November 12,
oral/details#interactions. Accessed November 12, 2016.